Stainless Steel Sliding Door, Stainless Steel Bypass Sliding Door, Stainless Steel Interior Sliding Door Manufacturers and Suppliers in China
Tsanangudzo:Stainless Steel Sliding Door,Stainless Steel Bypass Sliding Door,Stainless Steel Interior Sliding Door,Stainless Steel Folding Sliding Door,,
Home > Products > Automatic Sliding Door > Stainless Steel Sliding Door
Zvigadzirwa zve Stainless Steel Sliding Door , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Stainless Steel Sliding Door , Stainless Steel Bypass Sliding Door vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Stainless Steel Interior Sliding Door R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Industrial Trackless Electric Retractable Sliding Gate  Bata Ikozvino
Automatic Electric Trackless Electric Retractable Gate  Bata Ikozvino
Electric Retractable Single And Double Sliding Gate  Bata Ikozvino
Electric Retractable Stainless Steel Sliding Gate  Bata Ikozvino
Kupa Mazano: 200 sets/month
Industrial Trackless Electric Retractable Sliding Gate Getsi r inogadziriswa gonhi mhando yemukova unogona kutama uye unodzokorora zvakasununguka kuti uone uswa hwekuvhara masuo kuti udzivirire kusunungurwa uye kusunungurwa kwevatyairi kana...
Electric Retractable Stainless Steel Sliding Gate Mukova wekombiyuta wekugadziriswa pamakamuri maviri ndeye michina yekambani yakashandurwa, inoratidzika uye inofadza kuonekwa, girazi remukova richishandisa 38 × 25 (1mm yakakura) simbi isina utapu...
Kupa Mazano: 800 sets/month
China Stainless Steel Sliding Door Vatengi
Unhu uye Mazano
(1) Inyanzvi yekugadzirisa zvakagadziriswa: inogadziriswa piramu yepamusoro uye yechipiri parameter maererano nekurema kwemashizha emasuo;
(2) Kudengenyeka kwepasi: Inonyanya kunyoresa inzwi, kushamwaridzana kwemotokari, worm-gear uye kucherechedza.
(3) Anti-clamping basa: rinongodzokorora paunosangana nezvipingamupinyi;
(4) Chigadzirwa chemagetsi yemagetsi: iyo motokari ichavhara apo musuo unomanikidzwa kuzarura (unotungamirirwa nechekure kana kuti kushandura)
(5) Simbisa simba: chisimbiso chemukova kana chakavharwa, simba rekushandisa anenge 10W pasi pekumira;
(6) Advanced brushless motokari (36V, 100W) inogona kugadzirisa matanhi emasuo akakura;
(7) Bi-mikova mukati-kureva: rimwe remashizha emasuo rinoramba richivhara;
(8) Kuchengetedzwa kwema sensor kugadzirisa: sensor inogumira kushanda kana suo rakavharwa;
(9) Kushanda kwekombiki yakasiyana-siyana: haisati yakadzika;
(10) Nyore uye yakakodzera kuisa;
(11) Kushanda Nzira: kana mashizha egonhi achivhara kunzvimbo yakarurama, mashizha emasuo achaenda zvishoma nezvishoma kumusuo wemukova uye pasi. Mavara emakona mana evhazha remukova achabatana zvakakwana nemasuo egonhi uye pasi, izvo zvinoita kuti hutendere hwemhepo huve. Apo musuo wakazaruka, rubbers ichaparadzanisa kubva pamasuo emadziro uye pasi, izvo zvinodzivisa kupesana pasi.
(1) Rubhora iri kuvhara teknolojia yekugadzirisa pamwe neV groove padare rinotungamirira rinogonesa musuo mucherechedzo apo musuo wakavharwa;
(2) teknolojia yemunzvimbo yemuviri inokosha. Semicircular pamusoro pevhu rinofananidzwa neA V groove style pazasi kwegango remukova, iyo inomisa musuo kubva kusvetuka uye unova nechokwadi kuti inofamba yakagadzikana uye yakanyatsonaka;
(3) Muviri wemukova wakashongedzwa nesimbi isina kusina chinhu kana sarudzo, uye pakati uye kumativi ose maviri nekuisa chisimbiso kuti zvive nechokwadi chekudzivirira.
(4) Maziso etsoka anoshandiswa kuti asazvidzivirira;
Stainless Steel Sliding Door Stainless Steel Bypass Sliding Door Stainless Steel Interior Sliding Door Stainless Steel Folding Sliding Door Stainless Steel Upgrading Door